KwabaseRoma 14 - Oko Ukwenza Xa IBhayibhile Engacacini
Izifundo ezivela kumaRoma 14 kwiingxoxo zeSini
Ukuba iBhayibhile yincwadi yam yobomi, yintoni endiyenzayo xa iBhayibhile ingacacanga ngento?
Amaxesha amaninzi sinemibuzo enxulumene nemicimbi yokomoya, kodwa iBhayibhile ayicacisi okanye iyicacise ngaloo meko. Umzekelo opheleleyo ngumba wokusela utywala. Ngaba kulungile ukuba umKristu atywala ? IBhayibhile ithi kwabase-Efese 5:18: "Musani ukunxila ngewayini, kuba oko kuya kutshabalalisa ubomi bakho, kunokuba nigcwaliswe nguMoya oyiNgcwele ..." (NLT)
Kodwa uPawulos uxelela uTimoti kwi-1 Timoti 5:23, "Yeka ukusela kuphela amanzi, kwaye usebenzise iwayini encinci ngenxa yesisu sakho nezifo zakho eziqhelekileyo." (NIV) Yaye, ke, siyazi ukuba ummangaliso wokuqala kaYesu wawuquka ukujika amanzi abe yiwayini .
Musa ukukhathazeka, asiyi kuxoxa ngxubusho endala malunga nokuba iwayini elithethwa kwiBhayibhile yayingeyona yewayini okanye ijusi lamagilebhisi. Siya kushiya loo mpikiswano kubafundi beBhayibhile abanokuqonda. Ingongoma, kukho imiba enokubakho. KwiyabaseRoma 14, ezi zibizwa ngokuba "yimicimbi ephikisanayo."
Omnye umzekelo utshaya. IBhayibhile ayitsho ngokucacileyo ukuba ukutshaya kuyisono, kodwa kuthiwa kwiyoku-1 kwabaseKorinte 6: 19-20, "Awazi na ukuba umzimba wakho uyitempile yoMoya oyiNgcwele , ophakathi kwakho, owamkele Uvela kuThixo? Awuyena owakho, wathengwa ngentengo, ngoko ke mzukise uThixo ngomzimba wakho. (NIV)
Ngoko ufumana umfanekiso?
Eminye imiba nje ayicacanga: Ngaba umKristu usebenza ngeCawa? Kuthiwani ngokuthandana nomntu ongeyena umKristu? Ziziphi iifilimu ezifanelekileyo ukuzibona?
Izifundo ezivela kumaRoma 14
Mhlawumbi unemibuzo yokuba iBhayibhile ibonakala ingaphenduli ngokuthe ngqo. Makhe sijonge kwiRoma isahluko 14, esithetha ngokuthe ngqo malunga nale micimbi ephikisanayo, kwaye sibone oko esinokukufunda.
Ndiya kukucebisa ukuba uyeke ngoku kwaye ufunde isahluko sonke seyabaseRoma 14.
Imiba emibini ephikisanayo kule vesi yilezi: Ngaba amaKristu angayidli inyama eyayibingelelwe kwizithixo, nokuba ingaba amaKristu afanele ayenqule uThixo kwiintsuku ezithile ezingcwele zamaYuda.
Abanye bakholelwa ukuba akukho nto iphosakeleyo ngokutya inyama eyayinikelwe kwisithixo kuba beyazi ukuba izithixo zazingenanto. Abanye baqwalasela ngenyameko umthombo wenyama yabo okanye bayeka ukutya inyama. Ingxaki yayibaluleke ngakumbi kumaKristu ayekade ebandakanyeka kwizithixo . Kwaye, ukukhunjuzwa kweentsuku zabo zangaphambili kwakungumlingo omkhulu. Kwabuthathaka ukholo lwabo olutsha. Ngokufanayo, kwamanye amaKristu ayekade ekhonza uThixo kwiintsuku ezingcwele zamaYuda, wabangela ukuba bazive bengenanto kwaye bengathembekanga ukuba abazange bazinikezele loo mihla kuThixo.
Ubuthathaka obungokomoya kunye noKhuseleko kuKristu
Esinye isahluko sahluko kukuba kwezinye iindawo zokholo lwethu sibuthathaka kwaye kwezinye sizinzileyo. Umntu ngamnye uyaxanduva kuKrestu: "... ngamnye wethu uya kuphendula ingxelo kuThixo." KwabaseRoma 14:12 (NIV) Ngamanye amazwi, ukuba unenkululeko kuKristu ukuba udle inyama eyayibingelelwa kwizithixo, ngoko akusona isono kuwe.
Ukuba umntakwenu unenkululeko yokutya inyama, kodwa wena, musa ukuyeka ukumgweba. AmaRoma 14:13 athi, "masithi siyeke ukugweba omnye komnye." (NIV)
Ngexesha elifanayo ezi ndinyana zibonisa ngokucacileyo ukuba siyayeka ukubeka isikhubekiso kubazalwana bethu. Ngamanye amazwi, ukuba udla inyama kwaye uyazi ukuba kuya kubangela ukuba umzalwana wakho obuthakathaka akhubeke, ngenxa yothando, nangona unenkululeko kuKristu ukuba adle inyama, akufanele wenze into eya kubangela ukuba umzalwana wakho awe.
Singazifaka isifundo seyabaseRoma 14 kula maphulo amathathu alandelayo:
Yenza intliziyo yakho nesazela sakho phambi kukaThixo yedwa kukuxelela okulungileyo nokungalunganga kwimicimbi engacacile eBhayibhileni. Ingaba unenkululeko kuKristu kunye nesazela esicacileyo phambi kweNkosi ukwenza nantoni na? Okanye, ingaba loo ndawo iyanciphisa ukuhamba kwakho kobuKristu?
Musa ukugweba umzalwana okanye udade wakho ukuba unenkululeko yokuba awunayo kwindawo.
Ukuba unamandla kwindawo kwaye unenkululeko kuKristu kuloo ndawo, ungaze uvumele inkululeko yakho ibangele umzalwana obuthathaka ukuba akhubeke.
Ndifuna ukunyamekela ukugxininisa ukuba ezinye iindawo zicacile kwaye zivumelekile kwiZibhalo. Asiyathethi ngemiba efana nokukrexeza , ukubulala nokweba. Kodwa kwimiba engacacile, esi sahluko sibonisa ukuba sifanele sigweme ukwenza imithetho nemimiselo ngokungathi banokuma ngokulinganayo nemithetho kaThixo.
Amaxesha amaninzi amaKristu asekela izigwebo zabo zokuziphatha kwimibono kunye nokungathandwa kwabo, kunokuba liLizwi likaThixo . Kungcono ukuvumela ulwalamano lwethu noKristu kunye neLizwi lakhe lusekele ukukholelwa kwethu.
Isahluko siphela ngala mazwi kwinyesi 23, "... kwaye konke okungaveli kwikholo kuyisono." (NIV) Ngoko, oko kwenza ukuba kucace. Vumela ukholo kunye nesazela sakho kukugwebe, kwaye ndikuxelele ukuba wenzeni kule miba.
Iimpendulo ezingakumbi kwiingxaki malunga nesono
Sinokukwazi Njani Ukuba Kukhona Isono?
Indlela uTamar abetha ngayo iNkqubo
Iyintoni Ingcaciso YeBhayibhile Yelihendo?
I-New International Version (NIV)
AmaKaledi aseMesopotamiya mandulo
I-Pre-Columbian Caribbean Chronology
Hlola Ubunzulu be-Orion
I-Ender's Game Quotes
10 Amazwi Ngama-eggsaur Amaqanda
Iyintoni Ingxaki yeBoulder Boulder?
Ukusebenza kweDirac Delta
Ukwahlukana Phakathi Kokugqithisa Nokukhawuleza
UAphrodite, ongumGrike ongumthikazi woLuthando
Ares: I-Greek God of War and Violence
Ngaba i-Edge Balls Out of Bounds?
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yeChesapeake
I-Ostpolitik: Ihlabathi laseNtshona Jamani lithetha ngeMpuma
Iintlobo ezintathu zeeNkqubo zoLungiso
Indawo eMnyama, uMthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
IsiFulentshi sesiGama sesiFrentshi: iiNgxenye zeBhunga
IsiNgesi sokuQinisekisa ukuThengiswa kweeNgqungquthela - iiVolum ezifutshane kunye nabaQonisi